Inona no Ampianarin’ny Baiboly Momba ny Fiainana sy ny Fahafatesana?
Ny Tilikambo Fiambenana | No. 4 2017
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Biak Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Digor Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Garifuna Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabiyè Kambôdzianina Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Mongol Mooré Myama Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Navajo Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Niue Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Runyankore Rutoro Samoanina Sango Saramaccan Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tchouvache Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zoloa tzeltal Éwé
MATOAN-DAHATSORATRA | EFA LALAM-PIAINANA VE NY FAHAFATESANA?
Hita ao amin’ny Genesisy ny resaka nataon’Andriamanitra tamin’i Adama, ilay lehilahy voalohany. Hoy izy: “Afaka mihinana izay laninao amin’ny voan’ny hazo rehetra eo amin’ny zaridaina ianao. Aza ihinananao anefa ny voan’ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa amin’ny andro ihinananao azy, dia ho faty tokoa ianao.” (Genesisy 2:16, 17) Tsy ho faty i Adama fa ho niaina tao amin’ny zaridainan’i Edena foana, raha nankatò an’io didy io.
Fantatr’i Adama hoe hiaina mandrakizay izy raha mankatò. Naleony anefa tsy niraharaha an’ilay didy, fa nihinana an’ilay voankazo voarara nomen’i Eva vadiny azy. (Genesisy 3:1-6) Mbola mizaka ny vokatr’izany isika hatramin’izao! Hoy ny apostoly Paoly: “Tahaka ny nidiran’ny ota avy tamin’ny olona iray ho amin’izao tontolo izao, ary avy tamin’ny ota no nidiran’ny fahafatesana, ka niely tamin’ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra.” (Romanina 5:12) I Adama ilay “olona iray” resahina eo. Fa inona kosa ilay ota, ary nahoana izy io no nitarika ho amin’ny fahafatesana?
Ninia tsy nankatò na nandika ny lalàn’Andriamanitra i Adama. Izay no atao hoe ota. (1 Jaona 3:4) Fahafatesana no sazin’ny olona manota, araka ny tenin’Andriamanitra tamin’i Adama. Raha nankatò azy foana àry i Adama sy ny taranany, dia tsy ho lasa mpanota na ho faty mihitsy. Tsy noforonina ho faty mantsy ny olona, fa ho velona mandrakizay.
“Niely tamin’ny olona rehetra” tokoa ny fahafatesana. Misy zavatra tsy mety maty ve anefa ao amintsika? Maro no milaza fa manana fanahy tsy mety maty ny olona, ary mbola velona any ankoatra izy io rehefa maty izy ireo. Raha marina izany, dia nandainga tamin’i Adama Andriamanitra. Nilaza mantsy izy fa ny fahafatesana no sazin’ny olona mpanota. Milaza anefa ny Baiboly fa ‘tsy mahay mandainga Andriamanitra.’ (Hebreo 6:18) I Satana, raha ny marina, no nandainga tamin’i Eva hoe: “Tsy ho faty velively ianareo.”—Genesisy 3:4.
Manao ahoana marina àry ny olona rehefa maty, raha diso ilay fampianarana hoe tsy mety maty ny fanahy?
MANITSY IZAY DISO NY BAIBOLY
Hoy ny Genesisy 2:7: “I Jehovah Andriamanitra namorona ny olona avy tamin’ny vovoky ny tany, sady nitsoka fofonaina nankao am-bavorony, ka lasa zavamananaina ny olona.” Avy amin’ny teny hebreo hoe nefesh * ilay hoe “zavamananaina.” Midika ara-bakiteny izy io hoe “zavaboary mifoka rivotra.”
Tsy milaza àry ny Baiboly hoe nasiana fanahy tsy mety maty tao amin’i Adama rehefa noforonina izy. Nasiana “fofonaina” kosa izy, dia lasa “zavamananaina.” Tsy ho hitanao ao amin’ny Baiboly mihitsy àry ny hoe “fanahy tsy mety maty”, na hikaroka toy inona aza ianao.
Raha izany no izy, nahoana no be dia be ny fivavahana mampianatra fa manana fanahy tsy mety maty ny olona? Tany Ejipta fahiny no niandohan’io fampianarana io, rehefa jerena ny tantara.
MAHAZO VAHANA NY FAMPIANARAN’NY MPANOMPO SAMPY
Grika mpahay tantara tamin’ny taonjato fahadimy Talohan’i Kristy (T.K.) i Hérodote. Nilaza izy fa ny Ejipsianina no “voalohany nanizingizina hoe manana fanahy tsy mety maty ny olona.” Nieritreritra an’izany koa ny Babylonianina. Novoizin’ireo filozofa grika ilay fampianarana, rehefa resin’i Aleksandra Lehibe ireo firenena tany atsinanan’ny Ranomasina Mediterane tamin’ny 332 T.K. Tsy ela àry ilay izy dia niely eran’ny Fanjakana Grika.
Tsy ho hitanao ao amin’ny Baiboly mihitsy ny hoe “fanahy tsy mety maty”
Sekta jiosy nalaza tamin’ny taonjato voalohany Aorian’i Kristy (A.K.) ny Esenianina sy ny Fariseo. Nampianatra koa izy ireo fa tsy mety maty ny fanahy. Hoy Ny Rakipahalalana Jiosy (anglisy): “Nanjary nahaliana ny Jiosy ny kolontsaina grika, indrindra fa ny filozofian’i Platon, ka lasa nino izy ireo hoe manana fanahy tsy mety maty ny olona.” Nilaza koa i Josèphe, Jiosy mpahay tantara tamin’ny taonjato voalohany, fa tsy avy ao amin’ny Soratra Masina io fampianarana io. Avy amin’ireo angano “ninoan’ny Grika”, hono, izy io.
Niely be ny kolontsaina grika, ka lasa nino an’io fampianaran’ny mpanompo sampy io ireo mitonona ho Kristianina. Hoy i Jona Lendering, mpahay tantara: “Mora ny nampifangaro ny filozofian’i Platon sy ny fampianarana kristianina. Nino mantsy i Platon fa nonina tany amin’ny tontolo mahafinaritra ny fanahintsika taloha, saingy naetry avy eo.” Lasa anisan’ny foto-pampianaran’ireo fivavahana milaza azy ho Kristianina àry ilay hoe tsy mety maty ny fanahy.
“NY MARINA HANAFAKA ANAREO”
Hoy ny apostoly Paoly, tamin’ny taonjato voalohany: “Milaza marimarina ny fanambarana avy amin’ny fanahy fa hiala amin’ny finoana ny sasany any aoriana any, satria mihaino fanambarana mamitaka avy amin’ny fanahy sy mihaino fampianaran’ny demonia.” (1 Timoty 4:1) Izany tokoa no nitranga! Anisan’ny “fampianaran’ny demonia” ilay hoe manana fanahy tsy mety maty ny olona. Tsy ao amin’ny Baiboly izy io, fa fampianaran’ny mpanompo sampy sy ny filozofa fahiny.
Soa fa nilaza i Jesosy hoe: “Ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hanafaka anareo.” (Jaona 8:32) Fahita any amin’ny fivavahana maro mantsy ny fampianarana sy fanao manala baraka an’Andriamanitra. Tsy hanaraka an’ireny intsony isika raha mahalala an’izay tena lazain’ny Baiboly. Ho olona afaka tokoa isika amin’izay. Tsy hanandevo antsika intsony koa ny finoanoam-poana sy ny fombafomba atao rehefa misy maty.—Jereo ilay efajoro hoe “ Aiza no Misy ny Maty?”
Tsy fikasan’ilay Mpamorona mihitsy ny hoe ho velona 70 na 80 taona eto an-tany fotsiny ny olona, dia avy eo ho velona mandrakizay any ankoatra. Noforoniny kosa izy ireo mba ho velona mandrakizay eto an-tany sy hankatò azy toy ny zanaka. Hita amin’izany fa tena tiany ny olombelona, ary tsy maintsy ho tanteraka ny fikasany. (Malakia 3:6) Manome toky ny mpanao salamo hoe: “Ny olo-marina no handova ny tany, ka honina eo mandrakizay.”—Salamo 37:29.
^ feh. 9 Mandika azy io hoe “fanahy manan’aina” ny Fandikan-tenin’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy. Ny Fandikan-teny Protestanta kosa manao hoe “olombelona”, ary ny Dikanteny Iombonana Eto Madagasikara hoe “manana aina.”
Afaka ny ho Velona Mandrakizay ve ny Olona?
Nahita zavamaniry any anaty rano efa velona an’arivony taona ny mpikaroka, taona vitsivitsy lasa izay. Io angamba no zavaboary ela velona indrindra eto an-tany. Karazana ahi-maitso (Posidonia oceanica) izy io, ary rakotra azy ny fanambanin’ny Ranomasina Mediterane, eo anelanelan’i Espaina sy Chypre.
Raha ela velona be hoatr’izany ny zavamaniry, ahoana kosa ny amin’ny olombelona? Velom-panantenana ny mpahay siansa sasany satria mbola azo halavaina, hono, ny androm-piainan’ny olona. Resahin’ny boky iray, ohatra, ny “fandrosoana maro vitan’ny mpahay siansa” amin’io lafiny io. Ho hita eo ihany raha hanalava ny androm-piainan’ny olona tokoa ireny fandrosoana ireny, na tsia.
Tsy miankina amin’ny siansa anefa no ahafahantsika ho velona mandrakizay. Miankina amin’i Jehovah Andriamanitra, ilay Mpamorona antsika, kosa izany. Izy mantsy no “loharanon’aina.” (Salamo 36:9) Hoy i Jesosy Kristy rehefa nivavaka taminy: “Mba hahazoan’izy ireo fiainana mandrakizay, dia ilainy ny mianatra hahalala anao, ilay hany tena Andriamanitra, sy Jesosy Kristy, ilay nirahinao.” (Jaona 17:3) Hotahina mandrakizay tokoa isika, raha miezaka ny hahalala sy hampifaly an’i Jehovah sy Jesosy Kristy Zanany.
Mino ny mpikaroka fa efa velona an’arivony taona io karazana ahi-maitso maniry any an-dranomasina io
AIZA NO MISY NY MATY?
Milaza ny Baiboly fa ao am-pasana ny maty, ary miandry ny fotoana hananganana azy. (Jaona 5:28, 29) Tsy mijaly izy ireo, satria ‘ny maty tsy mahalala na inona na inona.’ (Mpitoriteny 9:5) Noharin’i Jesosy tamin’ny torimaso lalina ny fahafatesana. (Jaona 11:11-14) Tsy tokony hatahotra an’ireo maty àry isika, na hanao fanatitra mba hampitonena azy. Sady tsy afaka mitahy izy ireny no tsy afaka manisy ratsy, satria “tsy misy asa na eritreritra na fahalalana na fahendrena ao amin’ny Fasana.” (Mpitoriteny 9:10) Hofoanan’Andriamanitra anefa ny fahafatesana rehefa hanangana ny maty izy.—1 Korintianina 15:26, 55; Apokalypsy 21:4.
Nahoana no Azonao Itokisana Izay Lazain’ny Baiboly?
Afaka matoky tanteraka an’izay lazain’ny Baiboly isika, noho ireto antony ireto:
Avy amin’Andriamanitra izy io: Misy boky 66 ao amin’ny Baiboly. Nosoratan’olona 40 teo ho eo izy io nandritra ny 1 600 taona, nanomboka tamin’ny 1513 T.K. ka hatramin’ny taona 98 A.K. tany ho any. Mirindra tsara anefa ny hevitra ao anatiny. Porofo izany fa ny hevitr’ilay Andriamanitra Mahery Indrindra no ao, fa nasainy nosoratan’olona fotsiny.
Mifanaraka amin’ny tantara: Mifanaraka tsara amin’izay nitranga teo amin’ny tantara ny zavatra resahin’ny Baiboly. Hoy ny boky Mandinika ny Baiboly ny Mpahay Lalàna Iray (anglisy): “Matetika ny tantaram-pitiavana sy ny angano ary ny fijoroana ho vavolombelona mandainga no nitranga tany amin’ny toerana lavitra sy tamin’ny fotoana tsy voafaritra. ... Ny tantara ao amin’ny Baiboly kosa miresaka daty sy toerana voafaritra tsara.”
Mifanaraka amin’ny siansa: Tsy boky momba ny siansa ny Baiboly, nefa mifanaraka tsara amin’ny zavatra hitan’ny mpahay siansa tatỳ aoriana ny zavatra resahiny. Nomena lalàna voafaritra tsara momba ny fahadiovana sy ny fanokanan-toerana an’ireo marary, ohatra, ny Israelita, ao amin’ny Levitikosy toko faha-13 sy 14. Ela be tatỳ aoriana anefa ny olona vao nahalala momba ny tsimokaretina sy areti-mifindra. Milaza koa ny Baiboly fa boribory ny tany sady mihevaheva eny amin’ny habakabaka. Taonjato maro tatỳ aoriana vao tena nahatakatra an’izany ny mpahay siansa.—Joba 26:7; Isaia 40:22.
Porofo vitsivitsy fotsiny ireo manamarina fa “ny Soratra Masina iray manontolo dia avy amin’ny herin’ny fanahy masin’Andriamanitra, ary mahasoa mba hampianarana, hananarana, hanitsiana izay diso.”—2 Timoty 3:16.
Azonao Antoka ve hoe Mbola ho Velona ny Maty?
Misy antony roa omen’ny Baiboly antsika mba hatokisantsika fa tena hitsangana ny maty.
MATOAN-DAHATSORATRA Fanontaniana Manitikitika ny Saina
MATOAN-DAHATSORATRA Inona no Ampianarin’ny Baiboly Momba ny Fiainana sy ny Fahafatesana?
Misy Havanao Marary Efa ho Faty Ve?
Baiboly Hebreo Tena Miavaka Nataon’i Elias Hutter
Ilay Litera Kely Indrindra Manome Toky Antsika
Nofinofy Fotsiny ve ny Paradisa An-tany?
Nahoana ny Olona no Maty?
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA No. 4 2017 | Efa Lalam-piainana ve ny Fahafatesana?
Raki-peo Fandikana raki-peo NY TILIKAMBO FIAMBENANA No. 4 2017 | Efa Lalam-piainana ve ny Fahafatesana?
No. 4 2017 | Efa Lalam-piainana ve ny Fahafatesana?
NY TILIKAMBO FIAMBENANA No. 4 2017 | Efa Lalam-piainana ve ny Fahafatesana?
Mankaiza ny Olona Rehefa Maty?
Inona no Atao hoe Ota?
Misy Fanahy Tsy Mety Maty ve ao Anatin’ny Olona?
Tsy Mety Maty ve ny Fanahy?
Milaza ve ny Baiboly fa Teraka Indray ao Amin’ny Vatana Hafa ny Olona Rehefa Maty?